I-Maze Runner Saga, nguJames Dashner | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, iintlobo, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Umgijimi we-Maze (isaga Imbaleki yemaze, ngesiSpanish) luthotho lweenoveli zamabali abhalwe ngumbhali waseMelika uJames Dashner. Izihloko zayo ezintlanu zapapashwa phakathi kuka-2009 no-2016, kunye nencwadi yeqabane Iifayile zeMaze Runner (2013). Kwimeko yoncwadi ibekwe ngaphakathi kwee-dystopias kulutsha nakubantu abadala abancinci.
Njengoluhlu Imidlalo yokulamba (Imidlalo yokulamba) kunye I-Divergent (Ulwahlulo), Imbaleki ye-maze ifumene uphononongo olukhulu. Ngokufanayo, ukwamkelwa kwayo kuluntu ngokubanzi kuye kwamnandi. Akumangalisi ukuba izihloko ezintathu zokuqala zoluhlu sele zenziwe ngempumelelo kwiithiyetha kwaye kulindeleke ezinye iifilimu ezimbini, ubuncinci.
1 Malunga nombhali, uJames Dashner
1.1 Iincwadi zeSaga zeMaze Runner
2 Ukufana kunye nokwahluka kweMidlalo yeNdlala kunye neDivergent
3 I-synopsis ye-Maze Runner-iMaze Runner (2009)
4 Iisinopsis zovavanyo lweScorch - Uvavanyo ngoMlilo (2010)
5 Amagqabantshintshi oNyango lokuFa- iNyango yokuFa (2011)
6 Isishwankathelo soMyalelo wokuBulala- iNtsholongwane eyiLethal (2012)
7 Isishwankathelo seKhowudi yeFever-Code CRUEL (2016)
8 Abalinganiswa abaphambili be-saga yeMbaleki yeMaze
8.2 UTeresa Agnes:
8.8 Ingqonyela Ava Paige:
Malunga nombhali, uJames Dashner
UJames Smith Dashner wazalelwa e-Austell, Georgia, United States, nge-26 kaNovemba ka-1972. Waye kwiYunivesithi yaseBrigham Young, apho wafunda khona i-accounting. Nangona kunjalo, ngeentsuku zakhe zekholeji wagqiba ekubeni abe ngumbhali, kuba ebuntwaneni wayethanda ukufunda. Emva kwemizamo eliqela, uDashner wadala isimilo sikaJimmy Fincher kwaye wandise indalo yakhe ukuze agqibe uthotho lwencwadi UJimmy Fincher Saga.
Emva kokugqiba zonke izihloko ezine zikaJimmy Fincher, uDashner wajika waya kolunye uthotho: Umgijimi we-Maze. Nangona, zombini ezi ziqwenga ziyafana kwinto yokuba zikhula zijikeleze abantu abancinci ababandakanyeka kwiimeko eziyingozi. Kule meko, umbhali uxele ukuba ubenefuthe elikhulu ngu Nkosi yeempukane (Nkosi yeempukane) nguWilliam Golding kunye Umdlalo we-Ender (Umdlalo we-Ender) ngu-Orson Scott Card.
Iincwadi zesaga Umgijimi we-Maze
Kwimeko yokuqala, i-trilogy ene-character uThomas yaqaliswa: Umgijimi we-Maze (2009) Izilingo zeScorch (2010) kunye Unyango lokufa (2011). Emva koko, incwadi ethi prequel yavela Umyalelo wokubulala (2012), apho kuchazwa i-genesis yebali lilonke. Ngo-2016 yapapashwa Ikhowudi yoMkhuhlane, ibekwe ngokolandelelwano lwamaxesha phakathi kweziganeko ze Umyalelo wokubulala y Umgijimi we-Maze.
Ukufana kunye nokwahluka kweMidlalo yeNdlala kunye neDivergent
Ngokutsho Guardian (2014), ukufana phakathi kwencwadi yokuqala ye- Umgijimi we-Maze kunye nezo Imidlalo yokulamba y I-Divergent ziyamangalisa. Zisuka nje, ii-sagas ezintathu zibeka abalinganiswa abaphambili kwihlabathi lasemva kwembandezelo nengcinezelo ngolawulo lobuzwilakhe. Kuzo, iqhawe okanye iqhawekazi eliselula lifakwa kuvavanyo kwiimeko ezahlukeneyo ezisongela ubomi kwaye linyanzelwa ukuba lilwele ubomi babo.
Ngelixa incwadi ka Imidlalo yokulamba yabhalwa ngumntu wokuqala, umbalisi Imbaleki ye-maze kungumntu wesithathu. Omnye umahluko kukuba Umgijimi we-Maze unesitayile esikufutshane neenoveli eziyimfihlakalo xa kuthelekiswa I-Divergent y Imidlalo yokulamba. Kodwa ezi zimbini zokugqibela ziye zaqondwa ngokuchanekileyo, kokubini ngabaphulaphuli nangabagxeki boncwadi.
I-synopsis ye-Maze Runner-iMaze Runner (2009)
Ekuqaleni kwetrilogy, uThomas, umlinganiswa oneminyaka eli-16 ubudala, akayikhumbuli enye into ngaphandle kwegama lakhe kuba imemori yakhe icinyiwe. Uphulukene nomkhondo we Iigladers. Oko kukuthi, abemi abafikisayo bendawo esembindini ebizwa iGlade (ukucoca) ngaphakathi Maze (ubukhulu obukhulu). Ukuqiniseka kukaTomas kuphela sisidingo sokusombulula i-maze (umgaqoukusindisa abemi kunye naye.
Yonke imihla iqela elincinci lamakhwenkwe-iimbaleki- liphuma Iglasi Ukujongana nokungaziwayo ukufumana indlela yokuphuma noTomas. Ukongeza, iindonga ze-labyrinth zihamba busuku ngabunye ukutywina ukucoca (kwaye zikhusele kwizilo zangaphandle). Ngale ndlela, ubunzima bokuyisombulula buya busanda.
Iisinopsis zovavanyo lweScorch - Uvavanyo ngoMlilo (2010)
Emva kokubaleka umqobo, uThomas uziva ekhuselekile kwaye ekulungele ukuqala ubomi obonwabisayo kunye nabahlobo bakhe. Kodwa ngequbuliso uphoswa kwindawo eyinkqantosi apho ukutya kunqabileyo, kunye nokukhuselwa elangeni elibi. Emva koko Iigladers bayanyanzeleka ukuba banqumle le ntlango izaliswe ngabantu ngokufihlakeleyo belawulwa ngu Ukuqaqamba (i-flare).
Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, i-WICKED (into etsala imitya emthunzini) ithumela zonke iintlobo zezilo ezoyikisayo ngokuchasene Iigladers. Kancinci kancinci, iingqondo kunye nemizimba yabo iqala ukunikezela phantsi koxinzelelo lwezilingo zexesha elibuhlungu. Ngenxa yoko, bazinikela emandleni ukuze bazisindise. Ukungcatshwa kukaTomas kuhanjiswa phakathi kobushushu obungapheliyo.
Amagqabantshintshi oNyango lokuFa- iNyango yokuFa (2011)
Kwincwadi yokuvala ye-trilogy, i Iiteki zibonakala njengezona zisongelo ziphambili kuvavanyo lwesithathu. Imalunga nezinto eziphambeneyo - ezijikwe zaba ziZombi - ngenxa yosulelo lwentsholongwane echazwe kuyo Uvavanyo lwe-litmus. Le ncwadi icacisa iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nokuqala kwesaga xa uThomas ekhumbula ukuhlala kwakhe ngokufutshane le Iglasi.
Ngokufanayo, uhlobo lwe Ukuqaqamba kunye neQela B (iqela labantu abanomkhuhlane ofana noninzi lwe Iigladers). Emva kwexesha, i Iigladers kwaye amalungu eQela B ayakwazi ukufumana imemori yabo ngokupheleleyo kwaye abaleke kwi-domain ye-WICKED. Kodwa uTomas uyamelana nokubuyiselwa ukuze ahlangule amanye amaqabane akhe.
Isishwankathelo soMyalelo wokuBulala- iNtsholongwane eyiLethal (2012)
Iminyaka elishumi elinesithathu ngaphambi kokuba iziganeko zivezwe kwi Imbaleki ye-maze, umhlaba watshiswa lilanga kunye nokufa kwabantu abaninzi. Abalinganiswa abaphambili, uMarko noTrina, abakwazi ukuzisindisa kwaye basiwa kwindawo yokuhlala. Kunyaka kamva, umbutho we-PFC wahlasela umhlaba ngemijukujelwa enesifo se-zombie. Ngesi sizathu, iintlobo zabantu zisemngciphekweni wokuphela.
Kwindawo yokuhlala, nguMarko, uTrina, kunye noDeeDee (intombazana eneminyaka emithandathu ubudala) abasindayo. Ekugqibeleni bayila iqela lemigulukudu ecaleni kuka-Alec no-Lana ukuze bancedane njengoko bebaleka isixeko sabasulelekileyo. Ubundlobongela kunye noloyiko ngumyalelo wosuku kwincwadi enokubulawa kwabantu okungaphezulu lee kunetrilogy edityanisiweyo.
Isishwankathelo seKhowudi yeFever-Code CRUEL (2016)
Isicatshulwa sikaJames Dashner.
Incwadi ibaliswa ngokwembono kaTomas. Isixelela ngendlela awazahlulwa ngayo kubazali bakhe abosulelekileyo. Wasiwa kwangoko kwiziko apho izazinzulu zamxelela khona ukuba ukhuseleko lwakhe lithemba lokusinda koluntu. Kwangokunjalo, uJames Dashner uyacacisa kule ncwadi ukuba babebandakanyeka njani uThomas noTeresa ekwenzeni i-labyrinth xa babefakwa iGlade.
Ukongeza, ubudlelwane, ubudlelwane kunye nokusukuzana phakathi kwamanye amakhwenkwe iGlade. Mhlawumbi, Ikhowudi yoMkhuhlane yeyona ncwadi inzulu ngokwembono yeemvakalelo kwindalo iphela Runnerner. Ewe, njengezinye iincwadi ezikwi-saga, akukho kunqongophala kwemiboniso enobundlobongela kunye nokubulala i-zombie ezininzi.
Abalinganiswa abaphambili be-saga yeMbaleki yeMaze
(Iincwadi 1 - 3 no-5, ukubonakala okufutshane kwigumbi) Ungomnye wabenzi be-labyrinth kunye noTeresa Agnes. Uya kuba yinkokeli yeQela A le Iigladers. Igama lakhe lokwenyani yayinguStefano ngaphambi kokuba athinjwe nguWICKED. Wayebizwa ngokuba nguTomas ngokubhekisa kuThomas Edison.
(Iincwadi 1-5) igama lakhe laphefumlelwa nguMama Teresa. Nguye umdali weLabyrinth kunye noTomas. Igama lakhe lokwenyani nguDeeDee (lifumaneka kwincwadi 4).
(Iincwadi 1 - 3 no-5) zithiywe ngo-Sir Isaac Newton. Uyinkokeli yeqela laseBritane leQela A le Iigladers kwaye okwesibini kulawulo lwecandelo lika-Alby. Ungumzalwana kaSonya, enye yamantombazana akwiQela B, awambiza ngokuba nguLizzy.
(Iincwadi 1 - 3 no-5) yinkokeli yeqela laseAsia leQela A le Iigladers kunye nomgcini we Iimbaleki (iimbaleki). Wayeyinkokeli jikelele ye Iigladers ngexesha lovavanyo lomlilo.
(Iincwadi 1 - 3 no-5) ngumchasi kolu thotho. Wayeyinkokeli yeQela A le Iigladers xa uTomas wayejongwa njengotshaba ngencwadi yokuqala. Ishiywe ukuze ifile kwizilingo ngomlilo, iphinde ivele kwincwadi yesithathu njengehlakani. UGally ubizwa ngegama likaGalileo.
(Iincwadi 1 no-5) wayengumlawuli wokuqala we Iigladers. Yabizwa ngegama lika-Albert Einstein.
(Iincwadi 1 no-5, ezikhankanywe kwincwadi yesi-2 neyesi-3) Umhlobo osenyongweni kaTomas. Ebizwa emva kukaCharles Darwin.
Elona gosa liphezulu leWICKED.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Saga yembaleki yeMaze